China Wholesale Yepachinyakare Chinese Mushonga Maca Kugadzira uye Fekitori | Bestop
Chinese zita: ma ka
Chirungu Zita: Maca
ChiLatin Zita: Lepidium meyenii Walp.
Basa repamusoro: Kugaya uye kusimbisa muviri
Marca (zita resainzi: Lepidium meyenii walp.), (Spanish: Maca). Icho chirimwa chakaroverwa chizvarwa kuAndes yeSouth America. Oval mashizha, rhizome yakaumbwa kunge radish, inodyiwa, chikafu chakachena chechisikigo, chakafuma mune zvinovaka muviri, inozivikanwa se "South American ginseng". Iyo hypocotyl yeMaka inogona kunge iri yegoridhe kana yakajeka yero, tsvuku, pepuru, bhuruu, nhema kana girini. Iyo yakajeka yeyero midzi ndiyo yakajairika, ine yakanakisa chimiro uye kuravira. Maka akapfuma muzvikamu zvakakwirira zvemuviri, izvo zvinogona kusimbisa uye kusimbisa muviri.
Maka anozvarwa kunzvimbo yakakwirira ine makomo, inokodzera kukura munzvimbo dzakakwirira, kwakadzika nzvimbo, tembiricha musiyano pakati pehusiku neusiku, ivhu rine jecha zvishoma uye ivhu rine zuva; Inogovaniswa muAndes yekuSouth America, yakasimwa pakati nepakati kumaodzanyemba kwePeru, Yunnan neXinjiang yekuChina, uye ine nzvimbo hombe yenzvimbo yekudyara yakakodzera.
Kusimbisa nekusimbisa muviri.
Iwo maalkaloid ari muMaca ane antibacterial, antiviral, anticoagulant, analgesic, anti-inflammatory, anti-bundu uye anti moyo mhedzisiro mhedzisiro, kuitira kuti agone kushandiswa mukudzivirira kwehutachiona, menopausal syndrome, uterine fibroids, zamu hyperplasia, chisingaperi chemwoyo uye chirwere checebrovascular, etc.
Tea inogona kusarudza maca mahwendefa akaomarara, magiramu gumi pazuva, kuisa mahwendefa matatu ne5 panguva, ine bota remvura riri kufashaira, bota mushure mekunge mapiritsi asingarase, anogona kutsenga uye kumedza.
Soak 2-4G (2-3 zvimedu) zveMaca zvimedu mumvura inodzika (300-500ml nguva imwe neimwe mukomichi ye thermos) kwemaminitsi makumi maviri. Mushure mekunyorovesa ka4, iyo Maca zvidimbu zvinogona kudyiwa zvakananga.
Kubva pakupera kwaNovember kusvika kutanga kwaZvita, shizha remashizha ezvirimwa zvakawanda rakashanduka kuita yero uye rakadzima, iyo midzi ine nyama yakawedzera zvizere, uye hwaro hwaive hwakatenderera uye hwakatsetseka. Mushure mekukohwa kwekugadzira, bvisa mashizha, bvisa ivhu nemidzi ine fibrous, uzvichenese nemvura, uzvigure kuita zvidimbu woomesa muzuva.
Maca inogona kudyiwa muzuva, kana inogona kugadzirwa kuita ndiro inotonhora. Chikafu chakabikwa chiri nani. Pakutanga Columbus asati asvika muAmerica, hupfumi hwenyika yePeru hwave uri mukurumbira miriwo. Inogona kupa yakawanda kupisa simba. Vanhu vakaravira Maca vanoti kuidya kune pfungwa yekugutsikana, kunoita kuti vanhu vanzwe kugadzikana, uye kuravira kwayo kunotapira.
Maca midzi nyowani inogona kukangwa nenyama kana mimwe miriwo, kana kubikwa nemvura kana mukaka mushure mekuomeswa. MaAborigine emuno anowanzo kunwa midzi nyowani neuchi uye muto wemichero sechinwiwa. Maca yakafuma muzvikamu zvakakura zvemuviri uye ine basa rekusimbisa nekusimbisa muviri. Vanhu vakadya Maca vanonzwa kusimba uye kusimba uye havazonzwa kuneta.
Pashure: Nyowani Yekukohwa Yakasva Kaffir Lime Peel
Zvadaro: Mishonga Yembiriso Chinyakare Chinese Herbal Mushonga
Wholesale YeChinese Herbal Mushonga Ligustrum ...
Wholesale Yechinyakare Chinese Mushonga Torto ...
Wholesale yakaomeswa Polygonatum odoratum
Chinese Chinyakare Mushonga Zvekushandisa Ligusti ...
Tsika dzeChinese Herbal Mushonga Danshen Tablet
Raw Yakaomeswa Tangerine Peel Wholesale